Times24 Nepal » मन हुदाहुदै पनि किन यौ न सम्पर्कका लागि ‘नो’ भन्छन् महिलाहरु ?
एजेन्सी । यौ न सम्पर्क गर्ने अवसर छाड्दा मानिसलाई कस्तो महसुस हुन्छ। नयाँ अनुसन्धानको नतिजा हेर्ने हो भने पुरुष र महिलाबीच यहाँ ठुलो खाडल देखिन्छ। अनुसन्धानका क्रममा केही महिलाले मात्रै यौ न का लागि ‘हुन्‍न’ भनेकोमा आफुलाई पछुतो लागेको बताएका छन् । पछुतो गर्ने पुरुषहरुको संख्या भने ठुलो छ। उनीहरुले ‘हुन्छ’ भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। इभोलुसनरी साइकोलोजीमा यो सर्वेको नतिजा भर्खरै प्रकाशित गरिएको छ।
नर्वेमा बस्‍ने २ सय ६३ वयश्कहरुमाझ यो सर्वेक्षण गरिएको थियो। यो सर्वे र यसअघि अमेरिकामा गरिएको सर्वेको नतिजा उस्तै-उस्तै छ। सर्वे गर्ने क्रममा अनुसन्धानकर्ताहरुले अमेरिका र नर्वेमा फरक-फरक नतिजा आउन सक्ने अनुमान गरेका थिए। नर्वे यौ न का लागि खुकुलो राष्ट्र हो। तर सर्वेको नतिजा दुबै देशमा उस्तै देखियो। नर्वेमा गरिएको सर्वेअनुसार ३५ प्रतिशत महिलाले भर्खरै भेटेको पुरुषसँग यौ न सम्पर्क गर्दा पछुतो लागेको बताए। भर्खरै भेटेकी महिलासँग यौ न सम्पर्क गर्दा पछुतो लागेको बताउने पुरुषको संख्या २० प्रतिशत मात्रै छ।
पछिल्लोपटक यौ न सम्पर्क गरेर सन्तुष्टि मिलेको बताउने महिलाको संख्या ३० प्रतिशत मात्रै छ। पुरुषको संख्या ५० प्रतिशत छ। पछिल्लोपटक परपुरुषसँग यौ न सम्पर्कका लागि ‘हुन्न’ भन्ने महिलाको संख्यामध्ये ८० प्रतिशत आफ्नो निर्णयप्रति खुसी छन्। महिलालाई यौ न का लागि ‘ हुन्न’ भन्ने पुरुषमध्ये ४३ प्रतिशत मात्रै खुसी छ। यसरी ‘हुन्न’ भनेकोमा ४ प्रतिशत महिलाले मात्रै पछुतो गरेका छन्। यता, परस्‍त्रीसँग यौ न का लागि हुन्‍न भन्ने पुरुषहरुमध्ये ३० प्रतिशत पुरुषहरु आफ्नो निर्णयलाई लिएर पछुतो गर्छन्।
परपुरुषसँग यौ न का लागि ‘हुन्न’ भन्‍ने महिलाको संख्या किन बढी छ? किन उनीहरु परपुरुषसँगको से क्स को अवसर गुमाउनपर्दा पुरुषको तुलनामा कम दुखी हुन्छन्? यस विषयमा पनि अनुसन्धानकर्ताहरुले अनुसन्धान गरेका छन्। उनीहरुले पुरुषको तुलनामा महिलालाई यौ न का लागि बढी नै डर हुनुका कारण खुलाएका छन्। महिलाहरु गर्भधारण र यौ न रोगहरु सर्ने कारणले बढी चिन्तित देखिन्छन् त्यसैले उनीहरु परपुरुषसँगको सम्पर्कलाई ‘हुन्न’ भन्छन्। आफ्नो चरित्र खराब हुने डर पनि उनीहरुलाई छ। केही महिलाहरु यस विषयमा अपवादका रुपमा भएपछि पुरुषको तुलनामा महिलालाई यस्तो कुराले धेरै चिन्ता हुने अनुसन्धानले देखाएको छ।
पुरुषहरु भने महिलाको तुलनामा यौ न का लागि बढी जोखिम मोल्न तयार हुन्छन्। एकरातमा महिला र पुरुषमध्ये कसले धेरै यौ न सन्तुष्टी लिन्छ त ? यस विषयमा पनि अनुसन्धान गरिएको छ। महिलाको तुलनामा पुरुषहरुले धेरै चरम आनन्द लिने गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ। चरम उत्कर्षमा पुग्नैपर्छ भन्‍ने मान्यता राख्ने महिलाहरुको संख्या भने निकै कम छ। यस्तो किन ? अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार पुरुषको शारिरमा पर्याप्त विर्य उत्पादन गर्ने क्षमता हुन्छ। महिलाले असिमित बालबच्चा जन्माउन भने सक्दैनन्।
त्यसैले महिलाहरु आफ्ना पार्टनरको संख्या होइन गुणस्तरमा ध्यान दिन्छन्। उनीहरुले यौ न का लागि नो भन्नुमा यही कारण लुकेको छ। पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरुले दबाबमा कारण धेरै यौ न सम्पर्क राख्ने गरेको पाइन्छ। नर्वेजस्तो से क्स फ्रि संस्कृति भएको देशमा पनि उस्तै नतिजा निस्किएपछि अनुसन्धानकर्ताहरुले यसमा शारिरीक कारणले नै प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेका छन्।